Home Hoyga Nolosha Todobbadan qaab ula dhaqan dadka raba in ay sharaftaada hoos u dhigaan
Haddii qof uu isku dayo in u hoos kuu dhigo, raac qaababkan hoos ku xusan si aad u sameeysid falcelin guul ku gaarsiisa:
Dadka qaar ayaa iyaga oo og ama aanan oggayn isticmaala dabeecado ama erreyo dhaawac gaarsiiya dareenka ama qalbiga dadka ay la macaamilaan. Waxay noqon karaan tilmaamo sharaf dhac ah, ama dhaleeceyn joogto ah ama qofka oo loogu yeero magac uusan raali ka ahayn. Dabeecada ama dhaqamada noocan ah ayaa dadka u geeysta saameyn aan wanaagsanayn.
Sikastaba ha ahaatee, waxaa adag in aan wax ka qabanno dadka leh dabeecadahaas balse waxaan wax ka qaban karnaa qaabka aan uga falcelino hadii ay xaalad noocaas ah na qabsato.
Iska ilaali in aad xanaaqdid
Dadka qaar, falcelinta ugu horreysa ee sameeyaan ayaa ah in ay xanaaqaan marka ay la kulmaan qof hoos u dhigaya sharaftooda ama qiimahooda, taasna waa wax dabiici ah. Laakiin xanaaqa ayaa noqon kara waxa qofka kale uu kaa raadinayo. Xanaaqa ayaa qofka ka dhigi kara in uu khaladaad sameeyo, taasna waxaa ka faaiideysta qofka ficilka aadan jecleysanin kugu sameeyay isaga oo u arka in ay kaa guuleysteen. Haddii aad xanaaqdo, waxaa yaraanaya in aad maskax deggen aad ku fekerto, wuxuuna kaa hor istaagayaa in aad sameysid difaac sax ah. Marka waxaad iska ilaalisaa in aad xanaaqdo, isku day deggenaan in aad hesho xitaa xaaladda haday mudan tahay in aad xanaaq muujisid.
Waxaad ka fogaataa meesha xaaladda ka dhacday
Haddii lagugu sameeyo arin aadan jecleysanin, waxaad ka tagtaa ama ka fogaataa meesha ay xaaladaas ka dhacday. Danta ugu weyn ee qofka ku xumeeynayya kaa leeyahay ayaa ah rajo uu ka qabo in uu kugu ceebeeyo dadka kale, waxa uu qofkaasi kaa rabo ayaa ah in aad sameysid falcelin aanan wanaagsanayn maadaama uu kaa xanaajiyay, taas oo keeni karta adiga oon is ogeyn in aad sameysid wax fool xun. Hadii aad ka fogaato, waxaa meesha ku harraya hadalka iyo qofkii dhahay keliya, waxaana meesha ka baxaya saameynta uu adiga kugu lahaan lahaa.
Qaado wakhti inta aadan falcelinin
Markay tahay falcelinta, wakhtiga waa muhiim. Marka aad dhibsatid hadal qof kugu yiri ama ficil qof kugu sameeyay, waxa ugu fiican oo la sameeyo waa in aad qaadatid neef qoto dheer, sidoo kale qaado wakhti si maskaxdaada uga shaqeeyso waxa dhacay iyo sida ugu fiican aad u jawaabi lahayd. Iska ilaali in aad durbaba dagaal gashid. Hadii aad fursad siisid maskaxdaada, waxay u badantahay in aad heshid waddo aad uga guulleysato qofka hadalada xun kuu isticmaalay ama kugu tilmaamay.
U aqbal ama iska diid cayda qaab saaxiibtinimo leh
Dadka qaar ayaa joogteeya in ay isticmaalaan hadallo qalafsan ama foolxun, magacyo dadka dhibsadaan ama in ay wax ka sheegaan dadka sida ay u egyihiin ama samayska jir-dhismeedkooda. Waxaa adag dadka noocaas ah in aan wax ka qabano dabeecadahooda, balse, waxaa noo furan in aan anaga falcelinteenna kaga guuleysanno. Hadii aad la kulanto qof noocaas ah, isticmaal labadaan qaab ee hoos ku xusan;
Adiga oo deggen u sheeg qofka ku caayay in aadan waxba ka qabin hadalka ama magaca uu kuugu yeeray, una sheeg in aadan kala jecleyn. Maadama qofkaas uu doonayay in uu kaa xanaajiyo, waxaa meesha kusoo xirmaya faaiidada uu ka heli lahaa in uu kuugu yeero magacaas ama saameynta hadaladaas ay kugu sameeyn lahaayeen. Sidaa darteed, qofkaas wuxuu meesha kaga harayaa isticmaalka hadalkaas ama magacaas.
Adiga oo deggen u sheeg in aadan raali ka ahayn in magacaas laguugu yeero ama hadaladaas laguu isticmaalo, waxaad u sheegtaa in ay ku khaldanyihiin, balse aysan wax dhibaato ah kuu keeneynin hadii ay sii wadaan isticmaalkooda. Usheeg in aadan kala jecleyn.
Weydii in ay kuu sharraxaan ujeedadooda
Hadii qof kugu dhoho hadal aadan jecleysanin, waxaad si saaxiibtinimo leh u weydiisaa in ay kuu sharraxaan. Waxaad weydiisa meesha ay ka maqleen iyo sababta ay kuugu isticmaaleen. In aad meesha ku furto wada hadal waxay kuu sahlaysaa in aad ogaato meesha uu hadalkaas ka imaaday. Waxaa meesha ku ceebooba ama xishood ku dareema qofka hadalkaas ku dhahay, waxayna iska ilaalin doonnaan in ay markale sidaas kuula dhaqmaan.
Iska indho-tir qofka ku caaynaya
Faaiidada ku jirta in aad iskaba indha-tirto qofka waxa aadan jecleysanin kugu tilmaama ayaa ah in ay dareemaan miisaankaaga. Sababta oo ah, in aadan qiimo u yeelin hadalka qofka dhahay iyo waxa ay dheheenba. Marka aad waxba ka soo qaadin cayda, waxaad kor u qaaday sharaftaada, waxaadna meeshaas ku muujisay in sharafta iyo qiimaha aad leedahay erey qof dhahay uusan waxba u dhimeynin. Waxaa meeshaas ku ceebooba qofka u hadlay sida xun.
Ka fogoow dadka dhaqamada sunta ah leh
Mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad la kulanto dad mar walba jecel in ay khilaaf ku dhex jiraan. Dabeecadahooda ha xukminin, waxaa laga yaabaa in aysan awood u leheen xakamaynta shucuurtooda. Sida ugu sahlan eed ku kala nabad-geli kartaan ayaa ah in aad joojisid la kulan kooda, hadii aad ku khasbantahay in aad kulantaan, isku day in kulankiina uu aad u gaabnaado kuna ekaado keliya danta kugu khasabtay in aad is aragtaan.
Previous article7 arrimood oo lamaanaha u sahlaya in ay waligood wada joogaan
Next article4 arrimood samee si aadan uga cabsanin qofka madaxda kuugu ah goobta shaqada